Bank of Tokyo Misubishi UFJ ၏ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌဦးကျော်ကျော်မောင်မှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း(၂၂.၄.၂၀၁၅)ရက်နေ့ | Central Bank of Myanmar
Bank of Tokyo Misubishi UFJ ၏ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌဦးကျော်ကျော်မောင်မှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း(၂၂.၄.၂၀၁၅)ရက်နေ့
Aug 17, 2015 04:10
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ ၏ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဌ
၂၂.၄.၂၀၁၅ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်မြို့။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျား၊ ယနေ့ BTMU UFJ ရဲ့ ဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ကြွရောက်လာကြတဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်
BTMU မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Go. Watanabe
နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ပဏာမဦးစွာ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ သမိုင်းမှတ်တိုင်သစ် စိုက်ထူနိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို လက်ကားဘဏ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဘဏ်ကြီးများထဲမှာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTMU ဘဏ်ဟာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ရန် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်တဲ့ ဘဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ရော မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အနေနဲ့ပါ ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါ တယ်။
BTMU ဘဏ်ဟာ ၁၉၁၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Mitsubishi UFJ. Financial Group ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ကာ နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ကျော်မှာ ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၇၅ခုကျော် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း မှာ ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၇၇၀ခန့်နဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ အခြားငွေရေး ကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဘဏ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ BTMU ဘဏ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ကနဦးခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီး ၆ လ အတွင်းမှာ လုပ်ငန်းစတင်ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ တည်ငြိမ်ခိုင်မာရေး၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လူသားအရင်းအမြစ် ပိုမိုတိုးတက် မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
လာမည့်အနာဂတ်ကာလရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်များနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ်များ ပိုမိုပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်ရေးအတွက်ကို အထောက်အကူ ပြုသွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များဟာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက် နေတာကို ပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ပိုမို တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် BTMU ဘဏ်က အဓိကအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စိတ်ချလက်ချ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ မိမိတို့ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ရော ပြည်တွင်းဘဏ်တွေနဲ့ပါ ဂျပန်ဘဏ် ကြီးများနဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင် ရေးတို့အတွက် Trade Financing ၊ SME Financing၊ Project Financing တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသွားကြရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ တန်းတူရည်တူဖြစ်ရေးအတွက် အထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ဂျပန်ဘဏ်ကြီးများရဲ့ အတွေ့အကြုံ နည်းနာနိဿယများ၊ စဉ်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှု၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုတို့အတွက် ဆောင်ရွက် ပုံ နည်းစနစ်များအား လေ့လာသင်ယူပြီး လက်တွေ့ပြန်လည် အသုံးချ သွားနိုင်ဖို့ ဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
BTMU ဘဏ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးသလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ပံ့ပိုးဆောင်ရွက် ပေးသွားဖို့လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒဖြစ်သော "အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အတူတကွ အောင်မြင်ရန်" ရည်မှန်းချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ BTMU အနေဖြင့်လည်း အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
BTMU ဘဏ်ခွဲအတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဘွဲ့ရလူငယ်များ ခန့်ထားပေးပြီး သင်တန်းများ ပေးကာ ပြုစုပျိုးထောင်နေမှုအတွက်လည်း များစွာ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံးက ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆက်လက် ပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်း အကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်။ BTMU ဘဏ်ဟာ မိမိကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ်များ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက် များအတိုင်း အကောင် အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးဘဏ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTMU ဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ခွဲလုပ်ငန်း တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ မြန်မာ့ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍ တည်ငြိမ် တိုးတက်ခိုင်မာရေးအတွက် အစွမ်းကုန်လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။